Dharka Dharka ah ee News iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
10-ka Bandhig ee ugu Sareysa Qalabyada Dharka
Bandhigyada ganacsiga ayaa ka socda adduunka oo dhan, waxayna siiyaan warshadaha iyo ganacsiyada fursad ay ku soo bandhigaan wax soo saarkooda ugu wanaagsan uguna cusub ayna ku helaan heshiisyo iyo macaamiil qiimo leh. Qof kastaa waa inuu booskiisa qabsado marka ugu horeysa ee bandhigga ka dibna uu kaalintiisa ka qaadan karo […]Read More
10-ka bandhig ee ganacsiga ee ugu wanaagsan xilliyada shaqada, dahabka iyo indhaha-xirashada
Saacadaha saacadaha, daahyada ama muraayadaha indhaha iyo dahabka ayaa ah kuwa ugu iibsiga iyo iibsiga badan adduunka. Iyaga ayaa lagama maarmaan u ah nolol maalmeedka, baahi iyo raaxo labadaba. Laga soo bilaabo dhowr doolar illaa hal milyan, qiimahoodu wuu kala duwan yahay, dadka baahiyaha qaba ama doonaya inay xirtaan kuwan ayaa iibsada oo sameeya alaabada noocaas ah […]Read More
Alaab-qeybiyeyaasha Farshaxanka Jirka - Sida loo ogaado alaab-qeybiye wanaagsan
Waa suuq si xawli ah u koraya oo uu ku leeyahay saamiyaal jumladleyda iyo qeybiyeyaasha, laakiin ma jiraan wax alaab-qeybiyeyaal ah oo farshaxanka jirka keena? Xaqiiqdii waxaad ubaahantahay inaad iska ilaaliso shirkadaha umuuqda inay dibindaabyo kuu sameynayaan maadaama ay yihiin kuwa magaca shirkadooda ku dhejiya calaamadaha cinwaankooda. Shirkadaha in […]Read More
Xirmooyinka Timaha Timaha; Waxyaabaha ay tahay in laga fiirsado
Ku qurxinta naftaada timo jaban oo qumman waa shaqo u baahan xirfadaha labada timo-jare iyo kuwa alaab-qeybiyeyaasha ah, si loo dhammaystiro. Aynu eegno sida naqshadeeyayaasha moodadu kuu beddeli doonaan, iyo waxa ay uga baahan doonaan alaab-qeybiyeyaashooda, ka hor intaanan sii wadin. Sida timaha kale oo dhan, timaha […]Read More
Qalabka nabarrada iyo xirmooyinka dhalada
Scarves, shawls iyo qalab kale ayaa laga iibsan karaa dhammaan tafaariiqleyda waaweyn ee internetka laakiin qodobkan waxaan ku eegaynaa meelaha ugu wanaagsan ee laga iibsado alaabtaan. Marka laga hadlayo dahabka gacmaha lagu xidho ee gaarka ah waxaad haysataa fursado badan. Hoos waxaa ku yaal alaab-qeybiyeyaal si aad ah loogu taliyay: Meel kasta oo aad [you]Read More
Waxa Loo Raadiyo Xilliga Fudud ee Maqaarka
Ilaa iyo inta maqaarku adkaysi u yeelanayo oo quruxsan yahay, waxay ahayd shayga ay doorteen soo saarayaasha badani inay soo saaraan suumanka. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood shirkaduhu waxay u dhiibaan wax soo saarka suumanka maqaarka alaab-qeybiyeyaasha heerka hoose, taasoo keenta alaab heerkoodu hooseeyo oo ka yar qanacsanaanta. Qormadan, waxaan ku eegaynaa qaar ka mid ah siyaabaha […]Read More
Soo-saareyaasha galoofyada maqaarka ah iyo Mittens ee Ragga
Markii aan ka fekereyno alaab-qeybiyeyaasha galoofyada maqaarka iyo mittens, magaca Ofik Gorski ayaa maanka ku soo dhacaya. Ninkani waa nin caan ku ah farsamada maqaarka ee caalamiga ah kana soo jeeda Ukraine. Ku biiridiisii ​​adduunka ee farshaxanka maqaarku aad ayuu u badnaa. Alaabtiisa iyo wax soo saarkiisa waa laga xushmeeyaa adduunka oo idil. Noo soo sheeg qaar ka mid ah […]Read More
Bixiyeyaasha Ugu Fiican Belts
Liiska alaab-qeybiyeyaasha waxaa ka mid ah maqaar, synthetic, nylon, vinyl, iwm. Mid waliba wuxuu leeyahay astaamo u gaar ah oo soo jiidasho leh oo mudan in la dalbado. Kuwani waxaa laga samayn karaa isku-darka maqaarka ama ka samaysan walxaha synthetic; runtii waxay kuxirantahay baahida iibsadaha. Suumanka dharka ayaa dadka qaar u adeegsadaan sababo la taaban karo. […]Read More
Joojiyayaashu waa qalab aad u badan, laakiin dad badani ma oga waxa ay yihiin. Haddii aad ganacsi leedahay, markaa had iyo jeer way fiican tahay in la ogaado waxa macaamiishaadu raadinayaan. Joojiyayaasha waxaa badanaa laga sameeyaa xariir, taas oo ka dhigaysa kuwo aad u raaxo badan. Maaddadu aad ayey qaali u noqon kartaa, sidaa darteed waxaa ugu wanaagsan in la iibsado […]Read More
Waa maxay sirta ka dambaysa bixiyayaasha timaha wanaagsan?
Qalabka timaha sida shanlooyinka timaha, burushka, burushka timaha, timaha gogosha, timaha isku xidhka, timaha timaha iyo shanlooyinka, burushka madaxa, timaha isku xidhka, jel timaha, timaha, kareemada xiirista, buufiyeyaasha kuleylka, timaha rooga, timo jarista, shanlada timaha, iyo timaha. waxaa loo isticmaalaa nolol maalmeedka. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa goobta shaqada codsiyada kala duwan sida dhibaatooyinka shaqada la xiriira, sameynta timaha […]Read More